Yuko Kaida – Cast – MMANIME
A Certain Magical Index Name - A Certain Magical Index Episodes - 24 Status - Finished Airing Number of Seasons -3Source - Light novel Genres - Action, Magic, Sci-Fi, Super Power Duration - 23 min. per ep. Rating - 17+ (Violence) Review ဇာတ်လမ်းကိုတော့ နောင်နှစ် ၃၀ အကြာ၊နည်းပညာထွန်းကားတဲ့ "Acedamy City" ဆိုတဲ့ ကျောင်းအမျိုးမျိုးတည်ထောင်ထားတဲ့ မြို့ကနေအစပြုပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာနဲ့အတူ ကျောင်းသားတွေမှာလည်းစိတ်စွမ်းအင်လိုအရာမျိူးတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုကျောင်းသားတွေထဲကမှ "Touma Kamijou" ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ စွမ်းအားအဆင့် ၀ သာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မသိမှာမသိတာက သူ့မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင်မရှင်းပြနိုင်တဲ့ " Imagine Breaker" ဆိုတဲ့ ဘယ်သဘာဝလွန်စွမ်းအားမျိုးကိုမဆိုပျက်ပြယ်စေနိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ထိုအကြောင်းကိုသတိမထားမိဘဲTouma ဟာ သာမန်ကျောင်းသားဘဝလေးကိုဖြတ်သန်းနေစဉ် တစ်နေ့မှာ" Index Librorum ...
The Promised Neverland Ray၊Emma နဲ့Norman ဆိုတဲ့ ကလေးသုံးယောက်ဟာမိဘဂေဟာမှာ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ကလေးသုံးယောက်ဖြစ်ပြီး "မေမေ" လို့သူတို့တွေခေါ်ကြတဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှု့နဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။တခြား ဂေဟာများနဲ့မတူ သူတို့ဂေဟာလေးဟာ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းလှသလို ဂေဟာတွင်းတားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့တောစပ်နားက ဂိတ်တံခါးကနေအပြင်ကိုထွက်သွားခွင့်မပြုတာပါဘဲ။ ကလေးအရွယ်များဖြစ်တာကြောင့် အန္တာရယ်ရှိတဲ့အရာများကနေကာကွယ်ဖို့လို့ပြောပေမယ့် ဒီ့ထက်နက်ရှိုင်းတဲ့ အမှန်တရားက အဲ့အထဲမှာရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ထိုအမှန်တရားကြီးကို သူတို့သုံးယောက် သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်ဘက်စောင့်ကြည့်ပေးပါ ep 01 ep 02 ep 03 ep 04 ep 05 ep 06 ep 07 ep 08 ep 09 ep 10 ep 11 ep 12 (Final)